Headline Nepal | उल्लासले छाएको दशैँको माहोल र महत्व !
उल्लासले छाएको दशैँको माहोल र महत्व !
२४ असोज, काठमाण्डौं । नेपालीहरुको महानपर्व बडादशैँ हरेक नेपालीको घर आँगनमा आइसकेको छ । सहर बजार विस्तारै सुनसान हुँदै गएका छन् भने गाउँघर दशैँको माहोलले धपक्कै बलेका छन् । कामको शिलशिलमा होस् वा अन्य कारणबस देश बाहिर तथा गाउँ छोडेका युवाहरु घर फकिने क्रम जारी छ । घर–घरमा दशैँसँगै सबैको ओठमा मुस्कान र मनमा हर्ष छाइरहेको छ ।
घर आँगन चटक्क सिँगारिएका छन् । चौतारीमा बसेर युवाहरु पिङ हालिरहेका छन् । चंगाजस्तै सबैको मन उडिरहेको छ । त्यतिमात्र हैन्, दशैँको विदा लिएर गाउँ फर्केका लाहुरेहरुको सान त झन छुट्टै छ । उनीहरुलाई गाउँबाट पाएको सम्मान र स्वागतले दंग बनाएको छ ।
हरेक घरका केटाकेटीहरु दशैँको लुगा लगाएर साथीहरुलाई आफ्नो लुगा देखाउन व्यस्त छन् । नयाँ लुगा लगाएर मामा घर जाने पर्खाइमा रहेका उनीहरुलाई देख्दा दशैँमा सवैभन्दा बढी खुसी त केटाकेटीहरु नै देखिन्छन् । रमाईलो र खुशियालीका साथ मनाईने दशैँ केवल रमाईलोमा मात्रै सिमित छैन । यसको सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कोणबाट अन्त्यन्त महत्व छ ।
नेपालीहरुको महान चाड बडादशैँलाई दशैँ, विजया दशमी, दशहरा र आयुध–पूजाको नामले चिनिन्छ । हरेक वर्ष आश्विन शुक्ल पक्षमा प्रतिपदादेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मानिने पर्व वा उत्सव नै दशैँ हो । यो नेपालीहरुको सवैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पर्व पनि हो ।
यो खासगरी आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनदेखि दशमीका दिनसम्मका फुलपाती, महाअष्टमी, महानवमी र विजयादशमी लगातार चार दिनको महापर्व हो । त्यसमा पनि विजयादशमीलाई भने मुख्य दिन मानिन्छ ।
दशैँलाई असत्य माथि सत्यको जितको रुपमा मनाइने पर्वको रुपमा हेरिन्छ । भगवतिले दानवी शक्तिमाथि र भगवान रामले रावणमाथि विजय हासिल गरेको उपलक्ष्यमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको हो । दशैमा हिन्दुधर्मकी शक्तिस्वरुपा देवी नवदुर्गाको विभिन्न नौ वटा रुपलाई पुजा गरिन्छ । देवीको नौ रुप शैलीपुत्री, ब्रम्हाचारणी, चन्द्रघण्टा,कुशमन्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी,कालरात्री, महागौरी र सिद्धिधात्रीको आश्विन शुक्लपक्ष प्रतिपदाका दिनदेखि क्रमशः एक एक दिन गरी नौ दिनसम्म पुजा गर्ने गरिन्छ । नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरुप मान्यजनबाट रातो टिका र जमरा लगाएर र आशिर्वाद थापेर दशै मनाइन्छ ।
दशैँको टीका, जमरा र दक्षिणा
दशैँमा आफुभन्दा ठूला मान्यजन र आफन्तबाट आशिर्वाद लिन निधारमा टिका थापिन्छ । यसरी मान्यजनले आशिष दिदै लगाइदिने टिका र जमराको निकै अर्थपूर्ण महत्व छ । गाईको दुधको दहि, चिनी, चामल र रातो रंगको मिश्रण गरेर बनाइएको टिका निधारको मध्यभागमा लगाइन्छ । यसको अर्थ ठुलावडा, मान्यजनले हामीलाई धन, बुद्धि र स्वास्थ्य सबैकुराले सर्वसम्पन्न बन्न प्रेरित गर्दै त्यसका निम्ति तेस्रो आँखा खुला राख भनेको हो । टिकासँगै घटस्थापनाको दिन राखेको जौको जमरा पनि लगाइदिने गरिन्छ ।
रातो र सेतो टिका तथा जमरालाई शान्ती एवम् समृद्धिको प्रतिक पनि मानिन्छ । त्यतिमात्र हैन्, विजयादशमीको दिन आ–आफ्नो गच्छेले भ्याए अनुसार मान्यजनबाट टिका ग्रहण गरिसकेपछि दक्षिणा दिने चलन पनि छ । सुख, शान्ती र समृद्धिको कामना गर्दै दिइएको दक्षिणालाई घरमा राख्नु भनेको लक्ष्मीलाई भित्र्याउनु सरह नै हो भन्ने विश्वास पनि रहि आएको छ ।
हरेक चाँडपर्वहरुले एउटा छुट्टै आनन्दको अनुभूति दिलाउँछन् । हर्ष, उल्लासका साथ आउने र मनाउँने चाडपर्वले छुट्टै रौनकता ल्याइदिन्छ । टाढा–टाढा भएका आफ्ना साथीभाइ, आफन्तजनसँग भेटघाट हुने बातावरण पर्वले जुटाइदिन्छ । त्यसैले नेपालीहरुको हरेक पर्वको बेग्लै नै मज्जा छ । तर पर्व मनाउँदा हामीले त्यसको वास्तविक मुल्य र यर्थाथ बुझेर निष्ठावान तरिकाले मनाउँनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का भने पक्कै पनि राख्नुपर्नेछ । सबैलाई वडादशैको हार्दिक मंगलमय शुमकामना ।
जमरा र दक्षिणा
माओवादी केन्द्रको बैठक आह्वान, स्थायी समिति र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने
कोरोना सङ्क्रमणबाट बिपी प्रतिष्ठानमा तीन जनाको मृत्यु
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा आइसोलेसनमा
आगो तापिरहेका बेला ढिस्को खस्दा बुटवलमा दुई जनाको मृत्यु
ललितपुर महानगरमा आजदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द
झापा प्रहरीद्वारा १९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन
ओमिक्रोनले कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ : डब्लूएचओ
वेस्ट इन्डिजमाथि इंग्ल्यान्डको रोमाञ्चक जित
काठमाडौं उपत्यकाका यी २७ स्थानमा लगाइन्छ बुस्टर डोज (सूचीसहित)
कोराना संक्रमणका कारण एकै दिन २३ जनाको मृत्यु
आजको आवश्यकता सकारात्मकता
माघ ५ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू
उपत्यकामा आज मध्यरातदेखि स्मार्ट लकडाउन लागू हुँदै
U.S. Dollar 1 118.77 119.37
European Euro 1 134.66 135.34
UK Pound Sterling 1 161.15 161.96
Swiss Franc 1 130.14 130.80
Australian Dollar 1 85.39 85.82
Canadian Dollar 1 94.83 95.31
Singapore Dollar 1 88.27 88.72
Japanese Yen 10 10.42 10.48
Chinese Yuan 1 18.73 18.83
Saudi Arabian Riyal 1 31.66 31.82
Qatari Riyal 1 32.62 32.78
Thai Baht 1 3.60 3.62
UAE Dirham 1 32.34 32.50
Malaysian Ringgit 1 28.37 28.51
South Korean Won 100 9.97 10.02
Swedish Kroner 1 12.96 13.02
Danish Kroner 1 18.09 18.18
Hong Kong Dollar 1 15.25 15.33
Kuwaity Dinar 1 392.81 394.79
Bahrain Dinar 1 315.07 316.66
Exchange Rates as of 2022-01-24 .
Buddhanagar, Kathmandu, Nepal, सूचना विभाग दर्ता नं..: 2745/2078-2079,Press Council Register No.:163